Constantino Chiwenga Headlines
HARARE (Reuters) - Robert Mugabe resigned as Zimbabwe's president on Tuesday a week after the army and his former political allies moved against him, ending four decades of rule by a man who turned from independence hero to archetypal strongman.
HARARE (Reuters) - Robert Mugabe resigned as Zimbabwe's president on Tuesday a week after the army and his former political allies moved against him, ending four decades of rule by a man who turned from independence hero to archetypal African strongman.
HARARE (Reuters) - Zimbabwean President Robert Mugabe faces the start of impeachment proceedings on Tuesday that could see him ousted within the week, against the backdrop of a military takeover dubbed "Operation Restore Legacy".
HARARE (Reuters) - Zimbabwe's top general said on Monday talks were planned between President Robert Mugabe and former vice president Emmerson Mnangagwa, whose sacking by the 93-year-old leader two weeks ago triggered a coup.
HARARE (Reuters) - Zimbabwe's ruling ZANU-PF will discuss the impeachment of President Robert Mugabe on Monday, its chief whip said, after a noon deadline expired for the 93-year-old to end his nearly four decades in power by resigning.
HARARE (Reuters) - Zimbabwean President Robert Mugabe has agreed to stand down after 37 years in power, CNN reported on Monday, after he avoided any mention of resignation in a rambling national address on Sunday night.
HARARE (Reuters) - Zimbabwean President Robert Mugabe has until noon (5.00 a.m. EST) on Monday to stand down or the ruling ZANU-PF will begin impeachment proceedings after the 93-year-old leader defied expectations he would resign.
Top Constantino Chiwenga Headlines
Zimbabwe's Mugabe in contact with ousted vice president www.reuters.com